चिपहरूको नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि एप्पलसँग इंटेल पार्टनरहरू म म्याकबाट हुँ
येशू अर्जोना मोन्टल्भो | | एप्पल, अफवाहहरु, धेरै
भेन्चरबिटको एक रिपोर्ट अनुसार, Intel भन्दा बढिको टोली समावेश गरेको छ 1.000 व्यक्ति आईफोनको अर्को पुस्ताको लागि चिप्स निर्माण गर्न। विशेष रूपमा, इंटेलले यसको आपूर्ति गर्ने आशा गर्दछ चिप 7360 XNUMX० LTE मोडेम एप्पल लाई, र सबै ठीकठाट भयो भने पनि निर्माणमा भाग लिनुहोस्।
आईफोन s एस र आईफोन s एस प्लससँग यसका सुविधाहरू छन् क्वालकॉम 9X45 एलटीई चिप्स। इंटेल आशा गर्दछ कि आउँदो वर्ष उनीहरूले कम्तीमा २०१ Apple मा बनेको एप्पलका आईफोनहरू आफ्नो मोडेम प्रदान गर्न सक्षम हुनेछन्। Qualcomm उहाँ हाल सबै एप्पल फोनहरूका लागि मोडेमहरू प्रदान गर्ने जिम्मामा हुनुहुन्छ।
इंटेलको एलटीई 7360 XNUMX० मोडेमले यस वर्षको अन्तमा उत्पादकहरूलाई ढुवानी सुरु हुने आशा गरिएको छ, यस बर्ष पछि रोल आउट गर्न। 2016। रिपोर्ट अनुसार Intel एप्पल संग यसको सम्बन्ध विचार गर्दछ मोबाइल विश्वमा तपाईंको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण छ। स्पष्ट रूपमा एप्पल एक धेरै मांग ग्राहक हो, त्यसैले अविश्वसनीय रूपमा ठूलो पैमानेको उत्पादनको साथ १,००० भन्दा बढी कर्मचारीहरूको आवश्यकता.
यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि इंटेल अझै पूर्ण रुपमा सम्झौतामा पुगेको छैन एप्पल संग। VentureBeat थप सुझाव दिन्छ एप्पल सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ एकल चिप आईफोनको अर्को जेनरेशनको लागि, जसले यसको संयोजन गर्दछ Ax प्रोसेसर र LTE मोडेम चिप। यो गर्न एक प्रदान गर्दछ द्रुत गति, उत्तम उर्जा व्यवस्थापन, र त्यसकारण राम्रो ब्याट्री जीवन। सानो चिपको लागि पनि गर्नाले यसले उपकरण भित्र आफै बढि ठाउँ पाउँदछ, जसलेaलाई लिन सक्छ ठूलो ब्याट्री.
जबकि एप्पलले चिप सिर्जना गर्दछ, इंटेलले यसको प्रक्रियाको माध्यमबाट उही उत्पादनको हेरचाह गर्नेछ १२ नानोमिटरहरू। हाल सामसु and र TSMC, प्रोसेसरको प्रोसेसरको उत्पादनको कार्य साझा गर्नुहोस् १२ नानोमिटरहरू। इन्टेलले प्रतिवेदन अनुसार उनीहरूलाई १ 14 नानोमिटर बनाउने छ। इंटेल यसको परिष्कृत गर्न पनि काम गरिरहेको छ १० नानोमिटर प्रोसेसर, जसमा एप्पल धेरै चासो राख्छ।
यद्यपि यस मध्ये कुनै पनि निश्चित गरिएको छैन, र सम्भवतः एप्पलले आउँदो आउँदो पीढी आईफोन २०१ 2016 मा घोषणा नगरेसम्म यस्तो हुँदैन, एप्पल ईन्जिनियरहरु यस परियोजना मा इंटेल संग काम गर्न पठाइएको छ.
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » अफवाहहरु » चिप्सको नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि एप्पलसँग इंटेल पार्टनरहरू
एप्पलले केहि १ "" म्याकबुक प्रो रेटिनामा स्क्रीन समस्याको अन्त्यको ख्याल राख्छ